China Soft PVC Labels fekitari uye vagadziri | SJJ
Zvinyoro zvePVC zvinyorwa zvinodaidzwa zvakare kunzi mabara erabha nevamwe vanhu. Dhizaini dzakasiyana nemhando dzese dzemavara musanganiswa. Nemashandisirwo akasiyana, kutsigirwa kunogona kuve iron, bepa, matepi ekunamatira, epurasitiki yakaoma, Velcro kana kunyangwe isina tsigiro asi kusiya tambo yekusonesa kumberi kwekumbosona pazvipfeko, mabhegi, uye mamwe machira. Zvinyoro zvePVC zvinyorwa ndizvo chinhu chakanakisa kumiririra kukosha kwezvakakosha.
Zvinyoro zvePVC zvinyorwa zvinodaidzwa zvakare rabha zvinyorwanevamwe vanhu. Dhizaini dzakasiyana nemhando dzese dzemavara musanganiswa. Nemashandisirwo akasiyana, kutsigirwa kunogona kuve iron, bepa, matepi ekunamatira, epurasitiki yakaoma, Velcro kana kunyangwe isina tsigiro asi kusiya tambo yekusonesa kumberi kwekumbosona pazvipfeko, mabhegi, uye mamwe machira. Zvinyoro zvePVC zvinyorwa ndizvo chinhu chakanakisa kumiririra kukosha kwezvakakosha.
Neruvara rwakazadzwa pa2D kana 3D magadzirirwo, iwo akapfava ePVC mavara anokwanisa kuitwa mumhando dzese dzezvimiro maererano nevakagadziri. Iwo madiki madiki anogona kudhindwa kunze kwemuvara wakazadzwa kuti iwo mavara anyatso kuitika.
Motifs: Kufa Yakarohwa, 2D kana 3D, rimwe chete divi kana maviri mativi
Colors: Inogona kufanana PMS mavara
Kupedzisa: Mhando dzese dzezvimiro dzinogamuchirwa, Logos inogona kudhindwa, yakashongedzwa, Laser yakatemerwa uye saka kwete
Apex 1pc / Poly bhegi, kana maererano yenyu chikumbiro
Pashure: Nyoro PVC Pin Mabheji
Zvadaro: Nyoro PVC Fridge Magnets
Zvipfeko Label Mugadziri
Tsika dzekupfeka Mavara
Tsika PVC zvinyorwa
PVC Labels Yekupfeka